Makonhesero andakaita kamwe kaTeacher Muharare, ndobva ndakarikita nayo tsvimbo nyoro – Vanoda Zvinhu
Mumwe musi ndaive ndakapaka hangu mutown muna Jason Moyo Avenue opposite paBarclays Bank paye minding my own business apo pakauya mumwe musikana pawindow remota achibvunza kuti ndinewo charger yeSamsung here.
Ndakati kwete akabva akurova hake pasi. Sezvo ndange ndisina zvandange ndichiita ndakabuda mumota ndokumusheedza kuti adzoke pane zvandaida kumubvunza. Ndakamuti “i can buy the charger if you are desperate?” She nodded her head akati thanks nekaVoice karipasi pasi. Ndakamuti apinde mumota iye ndokupinda achinyaririra. Hapana any specific chinhu chandaida kuziva as such, so takazongotaura hedu matters general akati anodzidzisa kuchimwe chikoro towards kuMhondoro. Anga apinda mutown for shopping.
Ndakazodzoka naye mutonaz kuti achienda kubhazi rekuchikoro kwake wanikwe bhazi racho raenda. Semunhu ange andivaraidza zuva rese ndakangoti ndomuendesa kuchikoro kwacho, nebango rangu zvaisatora nguva refu. Ndakasimudza mota, tati fambei tikatenga more beers tikatanga kurova hedu indi ndichitsika mafuta. Iye ndiye aicontroller music achitamba tamba zvake kana kutevedzera song yacho tichifara zvedu, ungaziva kuti ndivo Teacher vaya vanga vachimbonyara paye?? Ndakatambirwa zvose!
Takasvika pachikoro tikaenda kunogara maTeacher. Ndakaona mamwe maTeacher vari panze tikavakwazisa plus maintroductions but handina kana kumbokendenga nemazita ematicha ose iwayo, ndaingoda kuti ndisiye ndasvira Miss Makonesa ndobva ndadzoka hangu kuHarare. Saka ndakavati regai ndikubatsirei kudzikisa zvinhu mumota ndidzoke hangu mutown nekuti nguva dzafamba.
Ndakanzwa maTeacher aye vachirumbidza Mercedes Benz yangu, hanzi yaa iii yaakumberisa. Ini ndaitofunga hangu zvebeche at this point infact MBORO was doing all the thinking.
Takasiyana nemamwe maTeacher aye toenda muroom yavo nezvinhu zvavo. Vakanditenda zvekuti, vachiti havasati vambombonakidzwa zvakadaro plus ndiri easy kuswera neni. Vakazoti havazive kuti vonditenda sei.
Ndakangoti a hug would do. So vakaswedera pedyo kuzondipa hug ini ndikatange kuyevenudzwa nekuprresswa nemazamu avo.
Takabatana kudaro kwekanguva vachingonditenda ndakazodzikisa musoro totarisana mumaziso kwekanguvana. Vakabva vati ko chii vachinyemwerera ini ndikabva ndavakisser zvinyoro-nyoro pamalips. Havana kuramba, saka takatanga kukisana hevhi. Miss Makonesa vaigona kissing kwete zviya zvekuti mazimate everywhere or kuvhurisa muromo sezana reshiri. Ndakatanga kubhatanura top yavo, ndigotarisana nemazamu ange achakanyotsi twii seminzwa.
Ndakadzikisa one bra strap ndobva ndaisa zamu one mukanwa rurimi rwangu ruchitambisa manipples. Mwana akadedera nekupera simba haa Dr munongonzwa iwe! Ndakadzoka tokisana futi uku ndichitambisa mazamu, apa Teacher vongoti uum, maiwee kani uum, this is nice uum, vachinakirwa zvavo.
Next story Nudhu party netumababie twepa Bluez, unongonzwa iwe
Previous story First Time Yangu kukwira, raiva dapurahunanzva